Yibani Nembeko Kulowo Imfaneleyo | Efundwayo
“KuLowo uhleli etroneni nakuyo iMvana makubekho intsikelelo nembeko nozuko namandla ngonaphakade kanaphakade.”—ISITYHI. 5:13.
Kutheni uYehova noKristu befanelwe yimbeko?
Ngoobani abantu abafanelwe yimbeko, ibe kutheni?
Kusinceda ngantoni ukuba nembeko kwabo ibafaneleyo?
1. Kutheni abanye abantu befanelwe yimbeko, ibe siza kuthetha ngantoni?
UKUBA nembeko kuthetha ukumphatha umntu ngendlela ekhethekileyo nokumhlonipha. Kulindeleke ukuba loo mntu simphatha ngaloo ndlela abe wenze into okanye ukwisikhundla esikhethekileyo esimenza afanelwe yimbeko. Xa kunjalo ke masizibuze, Ngubani esifanele sibe nembeko kuye, yaye kutheni efanelwe yimbeko?
2, 3. (a) Kutheni uYehova efanelwe yimbeko ngokukhethekileyo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Ngubani iMvana ekuthethwa ngayo kwiSityhilelo 5:13, kwaye kutheni efanelwe yimbeko?
2 Njengoko iSityhilelo 5:13 sisitsho, ‘Lowo uhleli etroneni neMvana’ ngokuqinisekileyo bafanelwe yimbeko. Isahluko 4 sisixelela esinye isizathu sokuba uYehova efanelwe yimbeko. Izidalwa zomoya ezulwini ziyakhwaza zidumisa uYehova, “Lowo uphila ngonaphakade kanaphakade,” zisithi: “Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa.”—ISityhi. 4:9-11.
3 IMvana nguYesu Kristu, “iMvana kaThixo esusa isono sehlabathi.” (Yoh. 1:29) IBhayibhile ithi uphakame kakhulu kunabo bonke abantu abakha bangookumkani okanye abangabo ngoku. Ithi: “NguKumkani wookumkani neNkosi yeenkosi, okuphela konokungafi, ohlala ekukhanyeni okungenakufikeleleka, ekungekho namnye umntu ombonileyo okanye onako ukumbona.” (1 Tim. 6:14-16) Yinyani leyo. Kaloku, ngowuphi omnye ukumkani owakhe wafa ngokuzithandela ehlawulela izono zethu? Awuziva ufuna ukuthetha la mazwi athethwa yinyambalala yezidalwa ezisezulwini athi: “IMvana eyaxhelwayo ikufanele ukwamkela amandla nobutyebi nobulumko nokomelela nembeko nozuko nentsikelelo”?—ISityhi. 5:12.
4. Kutheni kunyanzelekile ukuba sibe nembeko kuYehova nakuKristu?
4 Kunyanzelekile ukuba sibe nembeko kuYehova nakuKristu. Soze siphile ngonaphakade xa singabahloniphi. Amazwi kaYesu akuYohane 5:22, 23 asenza siyiqonde kakuhle loo nto. Athi: “Kuba uYise akagwebi namnye, kodwa unikele konke ukugweba kuNyana, ukuze bonke bambeke uNyana kanye njengoko bembeka uYise. Lowo ungambekiyo uNyana akambeki uYise omthumileyo.”—Funda iNdumiso 2:11, 12.
5. Kutheni ngomkhamo othile kufuneka sibe nembeko yaye sibahlonele abanye abantu?
5 Abantu benziwe “ngokomfanekiso kaThixo.” (Gen. 1:27) Yiloo nto abaninzi babo benezinto abafana ngazo noThixo ngomkhamo ongalinganiyo. Abantu bayakwazi ukubathanda, ukuba nobubele nokubavela abanye abantu. Ekubeni abantu bedalwe banesazela, ngokuqhelekileyo banento eye ithi thiki ngaphakathi kubo ebaxelela ukuba into ilungile okanye ayilunganga, banyanisekile okanye abanyanisekanga, nokuba into ifanelekile okanye ayifanelekanga—nangona ngamanye amaxesha iye iwuphose umhlola. (Roma 2:14, 15) Abantu abaninzi bayazithanda izinto ezintle nezicocekileyo. Ngokuqhelekileyo bathanda ukuhlala ngoxolo nabanye abantu. Enoba bayayazi okanye abayazi loo nto, ngomkhamo othile babonisa uzuko lukaYehova, ibe ngenxa yoko bafanelwe yimbeko nentlonelo elinganiselweyo.—INdu. 8:5.
YIBA NEMBEKO ELINGANISELWEYO
6, 7. Ahluka njani amaNgqina KaYehova kwabanye abantu ngendlela ababaphatha ngayo ngembeko abanye?
6 Kufuneka sihluze xa sigqiba ngokuba sifanele sibabeke njani yaye kangakanani abanye abantu. Umoya wehlabathi likaSathana unefuthe kakhulu ebantwini abaninzi. Yiloo nto abanye bede babanqule abanye abantu endaweni yokubaphatha ngembeko nokubahlonipha ngendlela efanelekileyo. Babathathela phezulu abefundisi nabantu abaphambili kwiipolitiki, abezemidlalo, iimvumi nabalanganiswa, kunye nabanye abantu abadumileyo, ibe bababona beziingelosi. Ngenxa yoko, abantu abadala nabantwana babajonga njengemizekelo, yaye balinganisa indlela abathetha ngayo, abanxiba ngayo okanye abaziphatha ngayo.
7 AmaKristu enene awabi nembeko ebaxiweyo ngolo hlobo. UKristu nguye yedwa umntu owakhe waphila ongumzekelo ogqibeleleyo. (1 Pet. 2:21) Ayisoze imvuyise tu uThixo into yokuba sibaphathe ngembeko engabafanelanga abantu. Khumbula kaloku: “Bonke bonile baza basilela kuzuko lukaThixo.” (Roma 3:23) Kuzicacele ukuba akukho namnye umntu ofanele aphathwe ngembeko de anqulwe.
8, 9. (a) AmaNgqina KaYehova awajonga njani amagosa karhulumente? (b) Sifanele sisebenzisane kangakanani namagosa karhulumente?
8 Ehlabathini kukho abantu abanikwe igunya. Amagosa karhulumente amele aqinisekise ukuba umthetho uyathotyelwa nokuba kukho ucwangco, aze ahoye izinto ezifunwa ngabemi belizwe. Loo nto inceda wonke umntu. Ufanele ke ngoko umpostile uPawulos ukucebisa amaKristu ukuba ajonge loo magosa ‘njengamagunya awongamileyo’ ibe awathobele. Wawaxelela le nto: “Nikani bonke oko kubafaneleyo, lowo kufuneka irhafu kuye, mnikeni irhafu; . . . lowo kufuneka imbeko kuye, mnikeni imbeko leyo.”—Roma 13:1, 7.
9 AmaNgqina KaYehova awaphatha ngembeko loo magosa karhulumente, ngendlela elindelekileyo neqhelekileyo kumazwe ahlala kuwo. Sisebenzisana nawo njengoko esenza umsebenzi wawo. Kodwa ke, ukuwaphatha kwethu ngembeko nokusebenzisana nawo kulinganiselwe ngokusuka eZibhalweni. Asinakuwathobela de singathobeli uThixo okanye sithathe icala kwizinto zehlabathi.—Funda eyoku-1 kaPetros 2:13-17.
10. Abakhonzi bakaYehova bamandulo banguwo njani umzekelo wendlela esimele sisebenzisane ngayo noorhulumente namagosa abo?
10 Abakhonzi bakaYehova bamandulo bangumzekelo wendlela esimele sisebenzisane ngayo noorhulumente namagosa abo. Xa uBukhosi BaseRoma bathi abantu bafanele babalwe, uYosefu noMariya bathobela. Baya eBhetelehem nangona uMariya wayesele eza kubeleka izibulo lakhe. (Luka 2:1-5) Ngesinye isihlandlo, xa uPawulos watyholwa ngokwenza into engalunganga, wazithethelela ngembeko ibe wamhlonela uKumkani uHerode Agripa noFesto, irhuluneli yephondo lakwaYuda elaliphantsi kweRoma.—IZe. 25:1-12; 26:1-3.
11, 12. (a) Kutheni sicalula phakathi kwamagosa karhulumente kunye nabefundisi? (b) Ngowuphi umphumo omhle owabakho xa elinye iNgqina laseAustria laphatha umntu okwipolitiki ngembeko?
11 Nakuba kunjalo, amaNgqina KaYehova awabaphathi abefundisi ngembeko engaphaya kweqhelekileyo, nangona kusenokwenzeka ukuba bona bafuna ukuphathwa ngolo hlobo. Unqulo lobuxoki lusasaza ubuxoki ngoThixo ibe luyazigqwetha iimfundiso eziseLizwini lakhe. Ngoko ke, abefundisi sibaphatha ngembeko njengaye wonke omnye umntu kodwa asibi nembeko engaphaya kweqhelekileyo kubo. Siyazi ukuba uYesu wathi abefundisi bexesha lakhe ngabahanahanisi neenkokeli eziziimfama. (Mat. 23:23, 24) Kwelinye icala, ukuwaphatha ngentlonelo nangembeko amagosa karhulumente kunokuba nemiphumo emihle esingayilindelanga.
12 ULeopold Engleitner wayeliNgqina elikhutheleyo laseAustria elabanjwa ngamaNazi laza lasiwa kwinkampu yoxinaniso eBuchenwald ngololiwe. UGqr. Heinrich Gleissner wayelelinye lamabanjwa akuloo loliwe. Wayekwezopolitiko eAustria. Kodwa ke, wayengaginywa ncam ngamaNazi. Endleleni eya kuloo nkampu, ngentlonelo uMzalwan’ uEngleitner wacacisela uGleissner ngeenkolelo zakhe, owathi wammamela kakuhle. Emva kokuphela kwemfazwe yehlabathi yesibini, uGleissner kangangezihlandlo ezininzi wasebenzisa ifuthe analo ukuze ancede amaNgqina aseAustria. Inoba nawe unemizekelo oyaziyo yemiphumo emihle ngenxa yokuba amaNgqina eye ahlonela amagosa karhulumente, ewaphatha ngembeko ewafaneleyo njengoko iBhayibhile isithi amaKristu afanele enjenjalo.
ABANYE ABANTU ABAFANELWE YIMBEKO
13. Ngoobani abantu abafanelwe yimbeko nayintlonelo ngokukhethekileyo yaye ngoba?
13 Abantu esikhonza nabo bafanelwe yimbeko ibe simele sibahlonele, ingakumbi abadala abasikhokelayo. (Funda eyoku-1 kuTimoti 5:17.) Sibaphatha ngembeko kungakhathaliseki ukuba baloluphi uhlanga, bafunde kangakanani, bangoobani ekuhlaleni okanye banemali engakanani. IBhayibhile ithi ‘bazizipho ezingabantu,’ ibe banendima ebaluleke kakhulu kwilungiselelo likaThixo lokunyamekela abantu bakhe. (Efe. 4:8) Khawucinge ngabadala, abaveleli besiphaluka, amalungu eKomiti YeSebe namalungu eQumrhu Elilawulayo. Abazalwana noodade benkulungwane yokuqala babebahlonela abo babekhokela, ibe kusenjalo nakuthi namhlanje. Asibanquli abantu abamela ibandla lamaKristu abaziwayo okanye sibe ngathi sibona iingelosi. Kodwa ke, sibaphatha ngembeko ibe siyabahlonela abo bazalwana ngenxa yokuba besebenza nzima kwaye bethobekile.—Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 1:24; neSityhilelo 19:10.
14, 15. Ngowuphi umahluko okhoyo phakathi kwabalusi benene abangamaKristu kunye nabo bathi bangabo bexoka?
14 Abadala abanjalo baziwa ngokuba ngabalusi abathobekileyo. Ukuze babonise ukuba bathobekile, abafuni kuphathwa ngendlela abaphathwa ngayo abantu abadumileyo. Loo nto ibenza bahluke mpela kubefundisi banamhlanje nabo benkulungwane yokuqala uYesu awathi ngabo: “Bathanda eyona ndawo iphambili kwizidlo zangokuhlwa nezihlalo eziphambili kwizindlu zesikhungu, nemibuliso kwiindawo zemarike.”—Mat. 23:6, 7.
15 Abalusi abangamaKristu enene, kuba bethobekile, bathobela amazwi kaYesu athi: “Nina, ningabizwa kuthiwe Rabhi, kuba mnye umfundisi wenu, kanti nonke nina ningabazalwana. Ngaphezu koko, ningabizi nabani na ngokuthi nguyihlo emhlabeni, kuba mnye uYihlo, Lowo wasezulwini. Ningabizwa nangokuthi ‘iinkokeli,’ kuba inye iNkokeli yenu, uKristu. Kodwa lowo ungoyena mkhulu phakathi kwenu makabe ngumlungiseleli wenu. Nabani na oziphakamisayo uya kuthotywa, yaye nabani na ozithobayo uya kuphakanyiswa.” (Mat. 23:8-12) Umele ukuba uyabona ukuba kutheni abadala kumabandla amaNgqina KaYehova ehlabathini lonke bethandwa, behlonelwa yaye bephathwa ngembeko ngabazalwana noodade.
16. Kutheni kufuneka uqhubeke uzama ukuqonda nokwenza oko iBhayibhile ikutshoyo ngokuphatha abanye abantu ngembeko?
16 Masivume ukuba kusenokuthatha ixesha ukuhluza ukuba sifanele sibabeke njani abanye abantu yaye sibeke bani. Kwakunjalo nakumaKristu okuqala. (IZe. 10:22-26; 3 Yoh. 9, 10) Kodwa kuya kusinceda kakhulu ukubaphatha ngembeko abanye abantu njengoko iBhayibhile isithi masenjenjalo. Kuyanceda ukuba nembeko elinganiselweyo.
KUYANCEDA UKUBONISA IMBEKO EFANELEKILEYO
17. Kunceda ngantoni ukubonisa imbeko kwabo banegunya?
17 Xa sibahlonela yaye sibaphatha ngembeko abo baphetheyo kurhulumente, kusenokwenzeka basithethelele ukuze singaphazanyiswa mntu xa sishumayela. Ngenxa yoko, kumaxesha amaninzi umsebenzi wethu bawujonga ngendlela efanelekileyo. Kwiminyaka eliqela edlulileyo, uBirgit, onguvulindlela eJamani, waya kwitheko labaphumeleleyo kwisikolo sentombi yakhe. Ootitshalakazi baxelela uBirgit ukuba bekumnandi ukufundisa abantwana abangamaNgqina. Bathi bebeya kuva intw’ embi ukuba isikolo sabo besingayi kuba nabantwana abangamaNgqina. UBirgit wabacacisela wathi, “Abantwana bethu sibafundisa ukuba baphile ngemilinganiselo kaThixo, ibe loo nto iquka ukuba nembeko kootitshalakazi.” Omnye utitshalakazi wathi: “Ukuba bonke abantwana bebenjengabenu, bekuya kuba mnandi ukubafundisa.” Emva kweeveki ezithile, omnye wabo titshalakazi waya endibanweni eLeipzig.
18, 19. Kutheni ingumba obalulekileyo ukubaphatha ngembeko ebalingeneyo abadala?
18 Sifanele sibaphathe ngembeko abadala ngendlela imigaqo egqibeleleyo neyobulumko eseLizwini LikaThixo ethi masenze ngayo. (Funda amaHebhere 13:7, 17.) Sinako ibe simele sibancome ngenxa yokuba besebenza nzima size senze unako-nako wokwenza oko bathi masikwenze. Loo nto inokubenza bawenze umsebenzi wabo bevuya. Kodwa akuthiwa masinxibe, sizilungise, sinikele iintetho okanye sithethe ngendlela athetha ngayo umdala owaziwayo. Ukuba besinokwenza loo nto, besiya kuba ngathi singabalandeli baloo mdala. Masikhumbule ukuba loo mdala naye akafezekanga. Umntu esimele simxelise size simlandele nguKristu.
19 Siyabanceda abadala ngokubaphatha ngembeko nentlonelo ebafaneleyo, kodwa singabatatazeleli njengabantu abadumileyo. Kuya kutsho kube lula ngabo ukuphepha ukuba nekratshi, ukuzibona bebhetele kunabanye abantu okanye bengoongcwele-ngcwele.
20. Kusinceda ngantoni ukuba nembeko kwabanye abantu?
20 Xa sesithetha ngathi ke ngoku, ukubaphatha ngembeko ebafaneleyo abantu kwenza ukuba singahoyi iziqu zethu kuphela. Kusinceda singaphumi iimpiko xa siphathwa ngembeko. Kusinceda sihambisane nentlangano kaYehova, engaphathi mntu—enoba uliNgqina okanye akalilo—ngembeko engaphaya kwemfaneleyo. Ngaphezu koko, kububulumko kuba kusinceda singakhubeki xa umntu esiye samphatha ngembeko esiphoxa.
21. Yintoni eyona nto kusinceda ngayo ukubaphatha ngembeko ebalingeneyo abo ibafaneleyo?
21 Eyona nto kusinceda ngayo ukubaphatha ngembeko abo ibafaneleyo, kukuba sivuyisa uThixo. Senza into efunwa nguye, ibe ngaloo ndlela sinamathela kuye. Sitsho simncedise ekuphenduleni lowo umngcikivayo. (IMize. 27:11) Abantu abaninzi namhlanje abanambono ifanelekileyo ngokubonisa imbeko kwabanye abantu. Siyavuya thina kuba siyazi indlela uYehova athi masibaphathe ngembeko ngayo abanye abantu.